ဝိသုဒ္ဓိမဂ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဒီဃနိကာယ်, သံယုတ္တနိကာယ်, မဇ္ဈိမနိကာယ်, အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်
ကလျာဏီ ရာဇမဟာဝိဟာရကျောင်းတွင် ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကျမ်းသုံးခုဖြင့် ဗုဒ္ဓဃောသမထေရ်ကို ပုံဖော်ရေးဆွဲထားပုံ
ဝိသုဒ္ဓိမဂ် (သို့) ဝိသုဒ္ဓိမဂ် အဋ္ဌကထာ (ပါဠိ: ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂ; Visuddhimagga: အင်္ဂလိပ်: The Path of Purification) သည် သီဟိုဠ်ရဟန်းတော် ဗုဒ္ဓဃောသမထေရ် ငါးရာစုခန့်ဝန်းကျင်တွင် ရေးသားပြုစုခဲ့သော ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာ တစ်စောင်ဖြစ်သည်။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ အနုရာဓပူရမဟာဝိဟာရမှ မဟာထေရ်များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သည် နည်းအတိုင်း ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်ကို (၅ရာစုနှစ်၏) နားလည်သိမြင်ခြင်း၊ အနက်ထုတ်ဖော်ဖွင့်ပြခြင်းများဖြင့် စနစ်တကျ အနှစ်ချုပ်ရေးသားထားသော လက်စွဲကျမ်းစာဖြစ်သည်။
ထေရဝါဒ၏ တိပိဋက ခေါ် ပိဋကတ်သုံးပုံကျမ်းစာပြင်ပတွင် အရေးပါဆုံးသော ကျမ်းစာအဖြစ်လည်း ယူဆကြ၍ ပိဋကတ်သုံးပုံကျမ်းစာများ၏ အဖွင့် အဋ္ဌကထာဖြစ်၍ လွယ်ကူရှင်းလင်း ပြည့်စုံသည့် မဏ္ဍိုင်ကျမ်းတစ်ခုအဖြစ်လည်း ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
၁.၂ နောက်ပိုင်းဖြစ်ထွန်းမှုများအပေါ် ထင်မြင်သုံးသပ်မှု
၁.၄ ထေရဝါဒမဟုတ်သော လွှမ်းမိုးမှုများ
၂.၂ စင်ကြယ်ခြင်း ခုနစ်ပါး
၃.၄ ဥရောပဘာသာစကားများဖြင့် ဘာသာပြန်မူများ
ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကျမ်းကို မဇ္ဈိမနိကာယ်လာ "ရထဝိနီတိသုတ်"အပေါ်တွင် အခြေခံ၍ဖွင့်ဆိုသည်ဖြစ်၍ သီလစင်ကြယ်မှုမှ လှမ်းတက်ကာ နောက်ဆုံးအန္တိမပန်းတိုင်ဖြစ်သည့် နိဗ္ဗာန်သို့ အဆင့်ခုနစ်ဆင့်ဖြင့် ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းကို ဖော်ပြထားသည်။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ပါ အကြောင်းအရာတို့သည် အစောပိုင်းကျမ်းစာ ဝိမုတ္တိမဂ်တွင် ပါရှိသော အကြောင်းအရာများနှင့် အတော်လေး ဆင်တူမှုရှိ၏ ။
ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သည် ထေရဝါဒ အဘိဓမ္မာ၏ ဒဿနပိုင်းဆိုင်ရာများကို ရောင်ပြန်ဟပ်ညွှန်းဆိုနိုင်ကာ ရှေးအကျဆုံးဗုဒ္ဓကျမ်းစာများ (သုတ်များ)တွင် မတွေ့ရသော တီထွင်မှုများ၊ ဘာသာပြန်အနက်ဖွင်ဆိုချက်များပါသည်ဟု အနောက်တိုင်းပညာရှင်များက ယူဆကြသည်။ ဗုဒ္ဓဃောသမထေရ်၏ ဤကျမ်းစာတွင် မူရင်းကျမ်းများတွင်မပါသည့် လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ဥပမာအနေဖြင့် နိမ္မိတရုပ်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနည်းလမ်းများ[?] စသည်ကဲ့သို့သော လမ်းညွှန်ချက်များပါဝင်သည်ဟုလည်း ၎င်းတို့က ထင်မြင်ယူဆကြသည်။ ထိုသဘောသည် ထေရဝါဒ ကသိုဏ်းရှုမှုတွင် နောက်ပိုင်းမှဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သည် ကသိုဏ်းကျင့်ကြံမှုအပေါ်တွင် အဓိကထားသည်။ ဌာနိဿရော မထေရ် (Ṭhānissaro) အရ "ကျမ်းစာသည် ထပ်ဆင့်လက္ခဏာများကို ပေါ်စေရန်အလို့ငှာ အခြားတရားထိုင်ခြင်းနည်းများကို ကသိုဏ်းနည်းထဲသို့ အံဝင်ရန်ကြိုးပမ်းထားသည်။ သို့သော် ကျမ်းစာပါဖွင့်ဟဝန်ခံချက်များအနေဖြင့်ကို အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းသည် ကသိုဏ်းထဲသို့ အံ့မဝင်ပါ။" ကသိုဏ်းတရားရှုခြင်းအပေါ် အလေးပေးသော ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သည် ပါဠိကျမ်း(ရင်း)စာများနှင့် သွေဖည်ရာ ဈာန်ကျင့်စဉ်ကို အဓိကထား၍ မူရင်းကျမ်းစာများနှင့်မတူဘဲ အဋ္ဌကထာများ၌ ဈာန်ကို တစ်မျိုးအနက်ဖွင့်ထားသည်ဟု ဌာနိဿရော မထေရ်ကပင် ဖော်ပြသည်။
'ဒေးဗစ် ကာလုပဟန'က ဝိသုဒ္ဓိမဂ်တွင် အဇ္ဈတ္တဝိဇ္ဇ ခေါ် ရုပ်လွန်ဘောတရား ထင်မြင်ချက်ပေးမှုများ၊ ဥပမာ : သဗ္ဗတ္ထိဝါဒ (Sabbatthivāda)၊ သုတ္တဝါဒ (Suttavāda) တို့အပြင် ယောဂစရဝါဒ (Yogācāra) တို့၏ သဘောတရားများပါဝင်သည်ဟု မှတ်ချက်ပြုသည်။ ကာလုပဟန၏ မှတ်ချက်မှာ :
ဗုဒ္ဓဃောသမထေရ်သည် မဟာဝိဟာရ(အသိုင်းအဝိုင်း)အတွင်းသို့ အယူဆသစ်များကို သိသာထင်ရှားသောနည်းလမ်းဖြင့် စတင်မိတ်ဆက်ရာ၌ အလွန်သတိထားတော်မူသည်။ ၎င်း၏လက်ရာစာပေများက်ု ဝေဖန်စိစစ်မည့်သူများ၏ စိတ်ထဲ၌ သံသယပွားခြင်းမရှိစေဘဲ အယူဆအသစ်နှင့် အဟောင်းတို့ကို ရောနှောအဆင်ပြေစေခဲ့သူ ဗုဒ္ဓဃောသမထေရ်၏ စွမ်းရည်များမှာ ဤဝိသုဒ္ဓိမဂ်နှင့် အဋ္ဌကထားများပင်ဖြစ်သည်။
ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကို အပိုင်းကြီး (၃) ပိုင်းဖြင့် စီရင်ဖွဲ့စည်းထားရာ ၎င်းတို့မှာ :
ပထမအပိုင်းတွင် သီလနှင့်ပတ်သက်၍ ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းပြသထားပြီး တရားဆောက်တည်ရန် သင့်တော်သောကျောင်း ရှာဖွေနည်း၊ ကလျာဏမိတ္တ ရှာဖွေနည်းညစသည်တို့ပါဝင်သည်။
ဒုတိယအပိုင်းတွင် သမထအကျင့်ကို ဖော်ထုတ်ရှင်းလင်းထားကာ ကမ္မဋ္ဌာန်းလေးဆယ်တို့ပါဝင်လေသည်။ သမာဓိတည်သဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဉာဏ်စဉ်(အဆင့်)များကိုလည်း ရှင်းပြထားသည်။
တတိယအပိုင်းတွင် ခန္ဓာငါးပါး၊ အာယတန၊ သစ္စာလေးပါး၊ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်၊ ပညာမှဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဝိပဿနာတရားများ စသည်တို့ ပါဝင်၏ ။ ဤအပိုင်းသည် ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာအတွက် အထူးဝေဖန်ပိုင်းခြား တင်ပြထားသော အပိုင်းဖြစ်သည်။
အကျင့်တရားနှင့် လက်ဆင့်ကမ်းပြိုင်ပွဲဝင်သည့် ရထာူခုနစ်ဆင်းတို့ကြား နှိုင်းယှဉ်ချက်သည် ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရှိရေး ဆိုသည်အချက်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ဆင့်တက်လှမ်းရန်အတွက် စင်ကြယ်မှုတစ်ခုခြင်းစီကို လိုအပ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် စင်ကြယ်မှု ခုနစ်ပါး (သတ္တ ဝိသုဒ္ဓိ) အဖြစ်ရည်ညွှန်းကြရာ :
အကျင့်စင်ကြယ်ခြင်း (သီလ ဝိသုဒ္ဓိ)
စိတ်စင်ကြယ်ခြင်း (စိတ္တ ဝိသုဒ္ဓိ)
အမြင်စင်ကြယ်ခြင်း (ဒိဋ္ဌိ ဝိသုဒ္ဓိ)
ယုံမှားသံသယဖြစ်ခြင်းမှစင်ကြယ်ခြင်း (ကင်္ခါဝိတရဏ ဝိသုဒ္ဓိ)
လမ်းမှန်ဖြစ်/မဖြစ် (တနည်း) မဂ်ဖြစ်သည်/မဖြစ်သည် ကို ပိုင်းခြားသိခြင်း၊ ပညာဖြင့်စင်ကြယ်ခြင်း (မဂ္ဂါမဂ္ဂဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ)
မဂ်ဖိုရကြောင်းအကျင့် ဟုတ်သည်၊ မဟုတ်သည်ကို ကောင်းစွာ သိမြင်ခြင်း။ အကျင့်မှန်(ကျင့်ကြံသည့်လမ်းကြောင်း)နှင့်ပတ်သက်သော ပညာ ဒိဋ္ဌိဖြင့် စင်ကြယ်ခြင်း (ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ)
သောတပ္ပတိမဂ်၊ သကဒါဂါမိမဂ်၊ အနာဂါမိမဂ်၊ အရဟတ္တမဂ်တို့၌ ဖြစ်သောဉာဏ်။ ပညာ ဒိဋ္ဌိဖြင့် စင်ကြယ်ခြင်း (ဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ)
ဤသို့ "ပညာ၊ ဒိဋ္ဌိဖြင့် စင်ကြယ်ခြင်း"သည် တရား၏ အထွတ်အထိပ်ဖြစ်၍ လွတ်မြောက်ရာ နိဗ္ဗာန်ကို ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ လက္ခဏာသုံးပါးဖြစ်သော ဒုက္ခ၊ အနတ္တ၊ အနိစ္စ တို့အပေါ်တွင် အလေးပေးရှုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သမထဖြစ်ရေးထင် ဝိပဿနာဖြစ်ရေးကို ဦးစားပေးထားလေသည်။
ပညာရှင်များဖော်ပြချက်အရ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်သည် ဟိန္ဒူဘာသာ၊ဂျိန်းဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ တို့၌ အလွန်ရှားပါးသည့် ကျမ်းစာများထဲက တစ်စောင်ဖြစ်ကာ သိဒ္ဓိဟူသော သာမန်ထက်လွန်ကဲသည့် တန်ခိုးအစွမ်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ရေးအတွက် မည်သို့ပြုမူကျင့်ကြံရမည်ကို ပြသသောကျမ်းအဖြစ် ယူဆခဲ့ကြသည်။ မြေလျှိုး မိုးပျံ စသော စွမ်းအားများကို မဟာဘူတတစ်ခုကို အခြားတစ်ခုသို့ (ဥပမာ ပထဝီဓာတ်မှ အာပေါဓာတ်သို့) ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။ ကျင့်ကြံသောသူသည် ကသိုဏ်းကို တစ်ဖက်ကမ်းခပ်တတ်မြောက်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ဖြင့် ကျင့်ကြံဖူးသော ဒိပမား သည် ထိုသို့စွမ်းအားများကို သရုပ်ပြနိုင်သည်ဟု ဆိုကြ၏ ။ ည
Caroline A. F. Rhys Davids, Visuddhimagga Pali Text Society, London, 1920 & 1921. (လက်တင်အက္ခရာဖြင့်)
Warren, H. C. & Dharmananda Damodar Kosambi Visuddhimagga of Buddhaghosâcariya, Harvard Oriental Series, Vol. 41, 1950.(လက်တင်အက္ခရာဖြင့်)
Hewavitarne Bequest edition, Colombo, Sri Lanka (သီဟိုဠ်အက္ခရာဖြင့်)
Sinhala Visuddhimargaya, Pandita Matara Sri Dharmavamsa Sthavira, Matara, Sri Lanka, 1953 (သီဟိုဠ်ဘာသာဖြင့်)
ဝိသုဒ္ဓိမဂ် မြန်မာပြန် (ပထမတွဲ)၊ မဟာစည်ဆရာတော်၊ ဗုဒ္ဓသာသနာ့အဖွဲ့ ပုံနှိပ်တိုက်၊ ၁၉၇၂။
Royal Siamese edition, Bangkok, Thailand
คัมภีร์วิสุทธิมรรค (Khamphi Wisutthimak), Somdej Phra Buddhacarya (Ard Asabhamahathera), sixth edition. Bangkok: Mahachulalongkornrajvidyalaya University, B.E. 2548 (2005). ISBN 974-91641-5-6
The Path of Purity, Pe Maung (trans.), Pali Text Society, London,3vols., 1922–31 Part 1: Of Virtue, Part 2: Of Concentration & Part 3: Of Understanding
Bhikkhu Nyanamoli (trans.), The Path of Purification, Visuddhimagga, Buddhist Publication Society, Kandy 2011, ISBN 955-24-0023-6.
Buddhist Meditation, Edward Conze (trans.), NB: Partial translation, 2002, ISBN 81-215-0781-2
Der Weg zur Reinheit, Nyanatiloka & Verlag Christiani (trans.), Konstanz, 1952 (German)
Le chemin de la pureté, Christian Maës, Fayard 2002 (Français), ISBN 978-2213607658
↑ See, for instance, Kheminda Thera, in Ehara et al. 1995 p. xliii: "The Visuddhimagga isahousehold word in all Theravāda lands. No scholar of Buddhism whether of Theravāda or of Mahāyāna is unacquainted with it."
↑ Biographical article Britannica – June 14th, 2017 "...According to the various traditions of Buddhism, there have been buddhas in the past and there will be buddhas in the future. Some forms of Buddhism hold that there is only one buddha for each historical age; others hold that all beings will eventually become buddhas because they possess the buddha nature (tathagatagarbha)..."
↑ Nyanamoli 2011, p. xxvii.
↑ Shankman 2008, p. 53.
↑ See Thanissaro (1999) foratranslation of the Ratha-vinita Sutta. See the various Visuddhimagga printings listed below to see the manner in which this sutta is explicitly integrated into the work.
↑ Vimuttimagga & Visuddhimagga - A Comparative Study. PV Bapat, lvii
↑ Kalupahana, David J. (1994), A history of Buddhist philosophy, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited
↑ Sujato 2012, p. 329.
↑ Shaw 2006, p. 5.
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ ၁၀.၂ Bhikkhu Thanissaro, Concentration and Discernment
↑ Kalupahana 1994, p. 206.
↑ Kalupahana 1994, pp. 207-208.
↑ Gunaratana 1994, pp. 143-174.
↑ Jacobsen၊ edited by Knut A. (2011)။ Yoga Powers။ Leiden: Brill။ p. 93။ ISBN 9789004212145။ CS1 maint: extra text: authors list (link)
↑ Jacobsen၊ edited by Knut A. (2011)။ Yoga Powers။ Leiden: Brill။ pp. 83–86။ ISBN 9789004212145။ CS1 maint: extra text: authors list (link)
↑ Schmidt၊ Amy (2005)။ Dipa Ma။ Windhorse Publications Ltd။ p. Chapter9At Home in Strange Realms။
↑ Stede, W. (October 1951). "The Visuddhimagga of Buddhaghosācariya by Henry Clarke Warren; Dharmananda Kosambi". The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (3/4): 210–211.
↑ Stede, D. A. L. (1953). "Visuddhimagga of Buddhaghosācariya by Henry Clarke Warren; Dharmananda Kosambi". Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London 15 (2). doi:10.1017/s0041977x00111346.
↑ Edgerton, Franklin (January 1952). "Visuddhimagga of Buddhaghosācariya by Henry Clarke Warren; Dharmananda Kosambi". Philosophy East and West 1 (4): 84–85. doi:10.2307/1397003.
Gunaratana၊ Henepola (1994)၊ The Path of Serenity and Insight၊ Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited
Kalupahana၊ David J. (1994)၊ A history of Buddhist philosophy၊ Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited
Nyanamoli၊ Bhikkhu (2011)၊ The Path of Purification, Visuddhimagga၊ Kandy: Buddhist Publication Society၊ ISBN 955-24-0023-6
Shankman၊ Richard (2008)၊ The Experience of Samadhi: An In-depth Exploration of Buddhist Meditation၊ Shambhala
Shaw၊ Sarah (2006)၊ Buddhist Meditation: An Anthology of Texts from the Pali Canon၊ Routledge
Sponberg (2004)၊ |title= လွဲမှား သို့ မပါရှိ (အကူအညီ)တမ်းပလိတ်:Fcn
Sujato၊ Bhante (2012)၊ A History of Mindfulness (PDF)၊ Santipada၊ ISBN 9781921842092 . ISBN 9781921842108
Thanissaro Bhikkhu (trans.) (1999). Ratha-vinita Sutta: Relay Chariots (Majjhima Nikaya, 24).
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝိသုဒ္ဓိမဂ်&oldid=716258" မှ ရယူရန်
ပါဠိဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၀၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။